Biden iyo Harris ayaa jeediyey khudbadahoodii ugu horeeyey kadib markii la doortay… – Hagaag.com
Biden iyo Harris ayaa jeediyey khudbadahoodii ugu horeeyey kadib markii la doortay…
Dabaaldegyo lama filaan ah ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ka dib markii warbaahinta ay shaacisay guusha Mr Biden Sabtidii. Taageerayaasha Trump oo ka careysan natiijada ayaa isugu soo baxay magaalooyinka qaar laakiin ma jirin wax warbixino ah oo ku saabsan falal dhacay.
Isaga oo la hadlaya taageerayaashiisa oo ku faraxsan kuna sugnaa goob baabuurta la dhigto ee ku taal magaalada Wilmington, Delaware, Mr Biden wuxuu yidhi: “Waxaan ballan qaadayaa in aan noqon madaxweyne doonaya in la kala qaybsamo, laakiin aan mideeyo; Mareykanka. “
Madaxweynaha la doortey, ayaa ku dhawaaqay inuu dhisi doono gudigiisa jawaab celinta coronavirus si loo hubiyo in uu diyaar u yahay inuu fuliyo go’aannadaas laga soo bilaabo maalinta caleema saarkiisa ee Janaayo.
Harris: ‘waxaad doorateen midnimo iyo rajo’
“Waxaad doorateen rajo iyo midnimo, qaddarin, cilmi iyo haa, runti – waxaad u dooratay Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha soo socda ee Mareykanka. Wadada soo socotana ma sahlanaan doonto laakiin Mareykanku waa diyaar, sidaas oo kale aniga iyo Joe-na waxaan nahay diyaar”
Waxa ay sidoo kale xustay daqiiqad taariikhi ah oo natiijada doorashadu calaamadeysay: “In kasta oo aan noqon karo haweeneydii ugu horreysay ee xafiiskan ah, ma noqon doono tan ugu dambeeysa.”